Quartz nwere marcasite bụ obere nkume dị egwu - White iron pyrite - vidiyo
Zụta quartz sitere n'okike na marcasite n'ụlọ ahịa anyị
Quartz na marcasite bụ obere nkume dị nkọ. A na-ahụkarị Marcasite na quartz dị iche iche, mana ha anaghị adịkarị n'otu.
Aha ya bụ Marcasite
Marcasite ịnweta, nke a na-akpọ mgbe ụfọdụ na-acha ọcha iron pyrite, bụ sọlfọ iron (FeS2) nwere usoro orthorhombic kristal. Ọ dị iche na kristal dị iche iche na pyrite, nke bụ sọlfọ ígwè nwere ntọala klọọkụ. Ihe owuwu abụọ a nwere ihe jikọrọ ha na ha nwere ebumnuche S22− ion nke nwere obere njikọkọ dị n'etiti atoms sọlfọ. Ihe owuwu a di iche na otu esi hazie ihe an-eme ihe ndia n’adiri Fe2 +. Marcasite dị mfe nghọta ma dịkwa gara gara karịa karịa pyrite. Ihe nrịbama nke marcasite na-akụri ma mebisie ike n'ihi ihe owuwu kristal na-ejighị n'aka.
Ọ dị mma na-acha odo odo na-acha odo odo na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọcha na-enwe ọmarịcha ọla. Ọ na - eme ka ọ chachaa ma ọ bụ nwee odo odo ma na - enye ọyị ojii. Ọ bụ ngwa ihe eji eme ya ka enweghi ike iji mma ya megharia. A na-akpọ kristal dị gịrịgịrị, nke dị larịị, ma ọ bụrụ na ejikọtara ya na otu, akpọrọ cockscombs.
Quartz bụ mineral dị egwu, nke mejupụtara silicon na atom oxygen. Atọm ndị ahụ jikọtara ọnụ na usoro na-aga n'ihu nke SiO4 silica oxygen tetrahedra, ebe ikuku oxygen na-ekerịta n'etiti tetrahedra abụọ, na-enye usoro nchekwa kemịkal nke SiO2. Quartz bụ mineral nke abụọ kachasị akụ na ụba ụwa, na-akpata feldspar.
Quartz nwere ihe marcasite pụtara
Nchebe site na ike adịghị mma.
Ọ na-enyere aka ịbanye n'uche.
Na-eme ka ezinụlọ nwee obi ụtọ.
Na-etinye ike ịgwọ ọrịa iche nke quartz.
Na-eme ka ume dị mma dị mma.
Nwee oke nkwanye ugwu na ntụkwasị obi n’ebe ụmụ nwanyị nọ.
Ọ dị mma maka ịkwalite ihe okike.
Meziwanye ikike ịghọta ihe.
Ọ dị mma maka ikike iche echiche.
Quartz na Marcasite / Microscope x 10